Netflix ကaveဂုတ်လတွင် Dave Chappelle ဟာသအသစ်အကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် - Netflix မူရင်း
Netflix ကaveဂုတ်လတွင် Dave Chappelle ဟာသအသစ်အကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
Dave Chappelle သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၂၅ ရက်၊ California ရှိ Los Angeles ရှိ Hollywood Palladium တွင်ပြသခဲ့သည်။
သင်လွဲချော်ခဲ့ဖူးတဲ့ Netflix အပေါ်ကောင်းမွန်သောဟာသအထူး ၅ ခု နောက်ဆုံးတွင်ဗန်ဟယ်လ်စင်ရာသီ ၃ ကို Netflix ၌ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်
အသစ် Dave Chappelle ဟာသအထူး Netflix သို့သြဂုတ်လတွင်လာမည်။ Sticks & Stones သည်သြဂုတ် ၂၆ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Netflix တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
၁၃ အကြောင်းရင်း ရာသီ3သည် Netflix သည်အဓိကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်များနှင့်သြဂုတ်လတွင်သူတို့ကပြီးခဲ့သည့်လကကြေငြာခဲ့သည့် streaming service သို့လာရောက်သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစာရင်းတွင်မပါခဲ့ပါ။ ယနေ့တွင် Netflix က Dave Chappelle မှမူလ stand-up ဟာသအထူးအစီအစဉ်အသစ်ကိုယခုလထုတ်လွှင့်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုကြေညာလိမ့်မည်။
Dave Chappelle: တုတ်နှင့်ကျောက် s ကို Netflix မှာတနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 26 ရက်နေ့တွင်တနင်္လာနေ့တွင်ပြသခဲ့သည်အားလုံးကောင်းသောရုပ်ရှင်နှင့်ယခုလ Netflix ကအပေါ်ကြည့်ရှုရန်ပြပွဲ၏, ဒီဖြစ်ကောင်းရဲ့ကပြောသည်နှင့်ပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အခါအများဆုံးကြည့်ရှုသူများရှိလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chappelle သည်ဟာသတွင်အကြီးမားဆုံးသောနာမည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Netflix သည်အထူးအသစ်တစ်ခုအတွက်သူနှင့်သူနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
တုတ်နှင့်ကျောက်ခဲ streaming များကွန်ယက်အတွက် Chappelle ရဲ့ပဉ္စမဟာသအထူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါ၏အတရားမဝင်ရေတွက်အသုံးပြုပုံသူ့ကို Netflix ရဲ့ထိပ်တန်းရုပ်ပြ, ဒါမှမဟုတ်တစ်နည်းအတွက်အများဆုံး Netflix ကမူရင်းအထူးနှင့်အတူရုပ်ပြစေသည်။
Chappelle ရဲ့ပထမဆုံး Netflix မူရင်းအထူးလေးချက်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ တန်းတူညီမျှမှု, The Bird ဗျာဒိတ်ကျမ်း, လှည့်ဖျား၏ခေတ်, နှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏နှလုံးသားနက်ရှိုင်း အခု Netflix ပေါ်မှာ။
streaming ကွန်ယက်ကိုကြေညာခဲ့သည် တုတ်နှင့်ကျောက်ခဲ ဗွီဒီယိုသည်အောက်တွင်မျှဝေသည်။
အပေါ်ကကြေညာချက်မှာတော့ Netflix ကအထူးထံမှမည်သည့်ရိုက်ကူးမှုမျှမပြုခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်အထူးအသစ်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲကိုကြေငြာခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Netflix ကအပေါ်သြဂုတ်လ 26 ရက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနီးကပ်လာအဖြစ်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းအထူးများအတွက်နောက်တွဲယာဉ်မျှဝေပါလိမ့်မယ် Netflix ဟာများသောအားဖြင့်ဟာသအထူးအတွက် trailers တွေဝေမျှဖို့အတွက်လွှတ်ပေးမယ့်ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လောက်မှာပိတ်ထားတတ်ပါတယ်။ အမှုဖွင့်အဘယ်ကြောင့်ငါမသိပေမယ့်နောက်ထပ်သတင်းများနှင့်ဒီနောက်တွဲယာဉ်မှာကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါ Chappelle ရဲ့အထူးအသစ်အဘို့ဤမျှလောက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ Streaming ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအထူးအစီအစဉ်လေးခုကရယ်စရာကောင်းတယ်။ သငျသညျသေးသူတို့ကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်လျှင်သူတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ!
မင်းကြည့်နေမလား တုတ်နှင့်ကျောက်ခဲ Netflix ပေါ်မှာဒီလနှောင်းပိုင်းမှာလား ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ!
နောက်တစ်ခု:အကောင်းဆုံး Netflix ၂၅ ခုကဒီကျဆုံးခြင်းကိုကြည့်တယ်
greenleaf ရာသီ5Premiere နေ့စွဲ
netflix အပေါ်ဟာဝိုင်ယီ 5-0 ရာသီ 9
၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်။ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်သည်
ဘယ်အချိန်မှာ shadowhunters hulu အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
netflix အပေါ်ထွက်လာမယ့်ခုနစျပါးသေစေနိုင်သောအပြစ်များရာသီ2ဖြစ်ပါတယ်